I-Raw 17-Methyltestosterone powder abavelisi nabaxhasi-abaMveliso
I-17-Methyltestosterone powder ingenye yezona zinto zidala kakhulu ezitholakala ngomlomo we-oral steroids, ezinokunyanga ukungabikho kwe testosterone emadodeni, kunye nokuphatha umhlaza wesibeleko kubasetyhini abasemva. Isebenza ngokuchaphazela iinkqubo ezininzi zomzimba ukuze umzimba unyuke kwaye usebenze ngokuqhelekileyo.
I-17-Methyltestosterone powder emfutshane (58-18-4) ividiyo
I-17-Methyltestosterone powder emfutshane (58-18-4) Inkcazelo
I-17-Methyltestosterone powder iyinxalenye yokwenziwa komzimba, kunye ne-orbogenic-androgenic steroid (AAS) eyenziwa ekwenzeni unyango lwe-androgen kumadoda kunye nezinye izibonakaliso. yonyango ye-hormone ye-menopausal kwimpawu zamadoda ezinjenge-hot flashes, i-osteoporosis, kunye nesifiso esincinci sezesondo kubasetyhini kunye nokunyanga umdlavuza webele.
I-17-Methyltestosterone powder i-methyl receptor agonist eneempembelelo ze-anabolic. I-17-Methyltestosterone powder, efana ne-testosterone, ebopha kwi-cytosolic receptors, kunye nokutshintshwa kweokhilikliya kwinqanaba le-ligand-receptor lenza ukuba i-androgen iphendule imizimba yegesi. Imveliso yemfuza ixanduva lokukhula ngokuqhelekileyo nokuphuhliswa kwezitho zesini zesini kunye neempawu zesini zesibini. I-arhente nayo ibangela ukugcinwa kwe-nitrogen, i-sodium, i-potassium, i-phosphorus kunye ne-calcium.
I17-Methyltestosterone powder (58-18-4) Suqobo
Igama lemveliso I-17-Methyltestosterone powder
uhlobo Numama Android, Metandren, Testred
Iqela leziyobisi Androgen; Anabolic steroid
Inani leCAS 58-18-4
I molecular Fi-ormula C20H30O2
I molecular WSibhozo 302.45
IMasaisotopic Mass 302.225 g / mol.l
Ukuxuba Point 162-168 ° C (i-lit.).
Iphuzu lokubilisa: 383.47 ° C (uqikelelo olunzima)
I-Biological Half-Life malunga neeyure ze-3 (ii-2.5-3.5 iiyure)
Sukufaneleka H2O: ≤0.5 mg / mL
Aukuguquka Ukusetyenziswa kwezonyango: I-Methyltestosterone okanye isetyenzisiwe ekhatyweni kwexesha lokutshatyalaliswa, u-hypogonadism, cryptorchidism, kunye ne-erectile disys function in the men, kunye neendlela eziphantsi zokunyanga iimpawu ze-menopausal (ngokukodwa kwi-osteoporosis, ukutshisa okutshisa, kunye nokwandisa i-libido namandla), intlungu ye-postpartum kunye ne-engorgement, kunye nomhlaza wesifuba kubafazi
Yintoni i-Raw 17-Methyltestosterone powder (58-18-4)?
I-17-Methyltestosterone, i-synttotic derivative ye testosterone, i-androgen kunye ne-anabolic steroid (AAS). It is ikakhulukazi isetyenziselwa unyango lwamaqondo aphantsi e-testosterone kumadoda, ukulibazisa ukutshatyalaliswa kwamakhwenkwe kumakhwenkwe, kwizilwanyana eziphantsi njengengxenye yesifo se-menopausal ye-hormone yonyango yeempawu ze-menopausal ezifana nokutshisa okutshisa, ukunyuka kwe-osteoporosis, kunye nesifiso esincinci sezesondo kubasetyhini, kunye nokunyanga umdlavuza webele kwabasetyhini (1-3). Kubonakala ngathi i-crystals emhlophe okanye i-creamy white okanye i-powder, ehlanjululwayo kwiintlobo ezahlukeneyo zengqungquthela yomhlaba kodwa ingenasiphelo emanzini. Kufanele kube phantsi kolawulo lomlomo.
I-Methyltestosterone yafunyanwa kuqala kwi-1935 kwaye yaziswa ngokusetyenziswa kwezobisi kwi-1936. Yayenziwe ngokukhawuleza emva kokufunyanwa kwe testosterone, ibe yinye yezidakamizwa zokuqala ze-AAS. I-17-Methyltestosterone, ngaphaya komsebenzi wayo wezokwelapha, ingasetyenziselwa ukuphucula umgangatho kunye nokusebenza.
I-17-Methyltestosterone powder (58-18-4) isebenza njani
I-17-Methyltestosterone ithatha imiphumo ngeendlela ezimbini eziphambili: i-activation ye-androgen receptor (ngokuthe ngqo okanye njenge-DHT), kwaye ngokuguqulwa kwi-estradiol kunye nokusebenza kwezimpendulo ezithile ze-estrogen.
I-17-Methyltestosterone ingangena kwiiseli zetekisi ezijoliswe kuyo, zibophelela kwi-androgen receptor, okanye ziyancitshiswa kwi-5α-dihydrotestosterone (DHT) nge-enzyme ye-cytoplasm 5α-reductase. I-DHT ibopha kwi-samerogen receptor ngakumbi nangakumbi, ivumela ukuba namandla aphezulu kwaye anamandla. I-T-receptor okanye i-DHT-receptor complex iguqula isakhiwo esivumela ukuba singene kwi-nucleus yeseli kwaye ibophe ngokuthe ngqo kwi-nucleotide ethile yokulandelana kwe-DNA ye-chromosomal, ebizwa ngokuba yi-hormone response elements (HREs). Le nkqubo ilawula umsebenzi wokubhalwa komzimba weejethi ezahlukeneyo, ukuvelisa kwakhona iimiphumo ze-androgen.
I-17-Methyltestosterone powder emfutshane (58-18-4) Isisombululo
I-17-Methyltestosterone ilawulwa ngomlomo. Isilinganiselo esicetywayo siyahlukahluka kuxhomekeke kwiminyaka, ngesondo, kunye nokuxilongwa kwesigulane ngasinye. Isisombululo sihlaziywa ngokwempendulo yesigulane kunye nokubonakala kweempembelelo ezimbi. Ukuguqulwa kwamathambo kwindoda e-androgen-ilahlekile ifuna i-10 kwi-50 mg ye-17-Methyltestosterone imihla ngemihla. Nangona kunjalo, ubudala bexesha kunye neengxowanelwe kufuneka kuthathelwe ingqalelo kokubili ekuqingeni umthamo wokuqala kunye nokulungelelanisa umthamo. Amanyathelo asetyenziswa ekunyangeni kwexesha lokutshatyalaliswa kwexesha lokubaluleka ngokubanzi lukwinqanaba elingaphantsi linikezelwe ngasentla, kunye nobude obude, umzekelo 4 kwiinyanga ze-6. Ukuze unyango lwabafazi besisu somhlaza, umlinganiselo we-17-Methyltestosterone kumabhinqa uvela kwi-50-200 mg nsuku zonke.
I17-Methyltestosterone powder (58-18-4) benefits
I-17-Methyltestosterone powder ingaphatha iimpawu ezahlukahlukeneyo ezinjenge-hypogonadism, cryptorchidism, ukulibazela ukutshatyalaliswa komntwana, kunye nokungasebenzi kwe-erectile kwindoda, kunye namayeza aphantsi ukunyanga iimpawu ze-menopausal (ngokukodwa i-osteoporosis, ukutshisa okutshisa, kunye nokwandisa i-libido namandla), intlungu yesifuba se-postpartum kunye ne-engorgement.
Ikwasetyenziswa kwakhona kubafazi ukuba baphathe umdlavuza webele, ukuvuvukala ngenxa yokukhulelwa, kunye nokudibaniswa kwe-estrogen kunokunyanga iimpawu zokunqamuka kwesisu. Kuye kwasetyenziselwa ngokudibanisa ne-estrogen esterified ukuba unyango lweemodareyitha ezinqamlekileyo ezinxulumene nokuqeda i-menopause.
Thenga i-17-Methyltestosterone powder (58-18-4) esuka eBuasas
Isikhokelo esiphezulu seMethyltestosterone sokwakha umzimba
Stan, KB, Douglas, SM, i-Applied Pharmacology, Endocrinology, 2011
I-Basaria, S., Nguyen, T., Rosenson, RS, iDobs, AS, Impembelelo yoLawulo lwe-Methyl Testosterone kwi-Plasma Ukungaboni kakuhle kwabesetyhini baseMenopaopaus, Iimpapasho zoPhulo, Online, 2002
URogerio, AL, Ukunqumama kwexesha nokuguga, I-Endocrinology Yokuzalisa I-Yen & Jaffe (i-Seventh Edition), 2014
UChristopher, JL, Meg, EB, Ann, SC, Imiphumo ye-17α-methyltestosterone, iMethandrostenolone kunye neNandrolone Decanoate kwi-Rat Ratrous Cycle, I-Physiology nokuziphatha, 1997
UWilliam, uLlewellyn., Isondlo seMilo, Anabolics,2009
UKickman, AT, Pharmacology ye-Anabolic Steroids, IBritish Journal ye-Pharmacology, PMC 2439524, Online, 2018